သားသည်မိန်းမတစ်ယောက် ပါလာတယ်။ ထိုင်လျက် ကလေးကို
ချော့လို့လည်းမရ နို့လည်းမစို့နဲ့။ ဒါနဲ့ မအေလုပ်သူလည်းကြံရာမရဖြစ်ပြီး
ကလေးကို ခြောက်ရတော့တာပေါ့ “ဟဲ့ကလေး...နို့စို့မလားမစို့ဘူးလား..
နင်မစို့ရင် ရှေ့မှာရပ်နေတဲ့ လူကြီးကိုတိုက်လိုက်ရမလားလို့မေးလိုက်တယ်”..
ကလေးကလည်း ခြောက်မှပိုငို နို့လည်းလုံးလုံးမစို့ဘူး။
အခုဘဲ မဆင်းတော့ဘူး.. ခဏခဏမလုပ်နဲ့..လို့ကြိမ်းမောင်းသံကြားရတယ်။
ကဲမအဝှာ.. ကလေးကလည်းနို့လည်းစို့တာမဟုတ်ဘူး.. ဆုံးဖြတ်ချက်ကို
မချိတင်ကဲ ပြောလိုက်တော့မှာ... ခရီးသည်တွေအားလုံးပွဲကျသွားတာပေါ့ဗျာ။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး...တလောက TV မှာကြည့်လိုက်ရတဲ့ဟာသ
Posted by ဒီးဒုတ် at 7/26/2007 01:05:00 PM0comments
မောင်ဒီး ဘာလိုလိုလုပ်နေခဲ့တာကြာပေါ့။ သူများစာတွေလည်း မဖတ်ဖြစ်တာ
အတော်လေးကြာသွားတယ်။ ကြာဆို ၅လလောက်တောင်ရှိသွားပြီ။
ဘလော့ဂ္ဂါတွေ (အသစ်တွေ၊ အဟောင်းတွေ)အများကြီးတွေ့ရတာကလား။
စာရေးဆရာ/ဆရာမတွေတောင်ပါတာတွေ့တယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်းအားရစရာ
ကောင်းတယ်။ အချို့များဆို template အပျံစား အမိုက်စားတွေနဲ့
ဂုရုကွေးစကား ခဏငှားသုံးရရင် “ဟိုက်...ရှားဘား” လို့အာမေဋိတ်ဘဲ
ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကဆိုရင်... “ဒီပုရွက်ဆိတ် အတော်အသက်ရှည်နေပါလား”
လို့တောင် မောင်ဒီးရဲ့ နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ပို့်စ်ကို ရည်ညွှန်းနောက်ပြောင်သွားရဲ့။
ကိုယ်ငြည်စတ် (ကိုညီဆက် ကိုစချင်လို့)တောင်မှ ပို့စ်တွေအများကြီးပြန်တင်ထား
တယ်။ သိတ်ဝမ်းသာတယ်။ စာတွေ ပိုပြောင်မြောက်လာသလိုဘဲ။
့မြန်မာပြည်မှာလည်း ဘလော့ဂ္ဂါသမဂ္ဂ.. အဲလေ ယောင်လို့ ဘလော့ဂ္ဂါအဖွဲ့ဆိုလား
ဆုံစည်းကြတာတွေလည်းကြားရသဗျား။ (ဘီယာဆိုင်မှဆိုလား.... အဲဒါဆို မောင်ဒီး
လည်း ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုပါရဲ့ အဟီး...)။
ဘီယာဆိုလို့ အပြင်မှာလည်းမိုးကလေးအုံ့နေပါလား။ ရာသီဥတု ကိုယ့်ဘက်မှာ
ရှိနေရဲ့ ..(အလကားပြောတာပါ မောင်ဒီးမသောက်တတ်ပါဘူး...၀ိုင်းကောင်းမှပါ
occasional... social.. လောက်ပါဘဲ)။ မိုးအုံ့နေတယ်ဆိုလို့ လာလည်သွားတဲ့
“မသဓါ ဆိုလား မသဒ္ဒါဆိုလား :)” သူမဘလော့ဂ်သွားလည်မိတော့မှ
ပုံတွေဝေဆာစွာနဲ့ ကဗျာတွေဖတ်ရင်း သက်ပြင်းတွေချမိရဲ့...
အသက်ပေးသွားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်းမောင်ဒီး စဉ်းစားမိတယ်။
ငယ်ငယ်တုံးက ဥသြသံတွေကြားရတဲ့ တခါတရံ မိုးကလေးစွေနေတတ်တဲ့
လူတွေစိတ်မချမ်းမြေ့ရတဲ့ ထိုနေ့ ရောက်လာပြန်ပြီ။
ကို ဘယ်သူမှမေ့နိုင်ကြမှာ မဟုတ်သလို... အသက်ရှင်နေလျှက် သူများတကာ
သွေးတွေချွေးတွေရင်းပြီး ခင်းထားခဲ့တဲ့လမ်းမှာ နောက်ကျောမလုံဘဲ ခပ်တည်တည်နဲ့
နိုင်ငံကိုကယ်တင် ထားသူများလို့ ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား အော်နေကြတဲ့
လူ့ဝဲစားတွေက တော့ ဒီ ၁၉ဇူလိုင် ရောက်လာတိုင်း စိတ်ခြောက်ခြားနေရဦးမှာ
(မောင်ဒီးဘလော့ဂ်ကို လာလည်သူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)။
Posted by ဒီးဒုတ် at 7/10/2007 04:02:00 PM 1 comments
လူသူအသွားအလာနည်းတဲ့ ဒီမြေဝါရောင်လမ်းကြမ်းကြမ်းတွေရှိတဲ့နေရာ၊ ပြီးတော့
အခိုင်အခံ့ ဒါးချွန်လေးတွေတပ်ထားတဲ့ သံမဏိဝါယာခွေ စည်းရိုးလည်းရှိတယ်။
အစ္စရေးလူမျိုးအသက်ငါးဆယ်ကျော်အရွယ်သူမဟာ ဒီကြမ်းတမ်းပြီး အန္တရယ်ရှိတဲ့
နေရာကိုမှ လာချင်စိတ် ပြင်းပြလွန်းတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့.....
အဲဒီတစ်ရက်မှာ သူမကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းက သူမရဲ့နှလုံးသားကိုနှုတ်ယူလိုက်သလို
ပါဘဲ။ Yuni-ယူနီသေဆုံးသွားပြီတဲ့။ ယူနီဟာသူမသိပ်ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ သား။
အညွန့်တစ်လူလူနဲ့ အင်္ဂလန်မှာ ဆေးပညာသင်ယူနေတယ်။ ယူနီဘွဲ့ရပြီးရင် သူမတို့
ရဲ့မိသားစု ဂုဏ်ယူနိုင်ရုံတင်မက အစ္စရေးနိုင်ငံအတွက်တန်ဘိုးရှိတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်
ပေါ်ထွန်းလာမှာလို့သူမယုံကြည်ထားတယ်။ အခုတော့ သူမရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပျက်သုဉ်း
ယူနီ ပျော်ရွင်စွာကခုန်နေတာ...တကယ့်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ သားလိမ္မာကလေးပါ။
တစ်နေရာကပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီလမ်းဆုံရောက်တော့ ကျွန်တော့ကို လက်ပြ
နှုတ်ဆက်ပြီး ဆိုက်လာတဲ့ ဘက်စ်ကားပေါ်တက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်လှည့်ထွက်မလို့
ရတယ်။ ယူနီစီးသွားတဲ့ ဘက်စ်ကားဆိုတာသိလိုက်ရတယ်”။ အသေခံ ပါလက်စတိုင်း
ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်သူတွေရဲ့လက်ချက်လို့ ပြောကြတယ်။ ဒီလိုအသေခံဗုံးခွဲမှုမျိုးဟာ
ဂျေရုစလင်မြို့မှာ ဘယ်တော့မှာမှ ချုပ်ငြိမ်းပျောက်ကွယ်သွားမှာလဲ။
အဲဒီနေ့က သူမဟာအရူးမီးဝိုင်း လမ်းမပေါ်မှာ ပြေးလွှားနေခဲ့တယ်...ပါးစပ်ကလဲ
သူမရဲ့သားလေး တွေ့မိကြလားဆိုပြီး တွေ့သမျှလူတွေလိုက်မေးနေမိတာပါဘဲ။
ဗုံးဒဏ်ကြောင့်သေဆုံးကြရတယ်။ နောက်တော့သတင်းရတာက ယူနီ ဆေးရုံမှာဆို
တာပါဘဲ။ သမားတော်တွေအစီရင်ခံချက်အရ ယူနီမသေဘူးဆိုပေမယ့် မျှော်လင့်ချက်
မရှိတော့ဘူးတဲ့။ ယူနီဟာ ဘယ်တော့မှပြန်လည်မနိုးထနိုင်တော့မယ့် ဦးနှောက်သေဆုံး
သွားပါပြီ။ တကိုယ်လုံးမှာလည်း ဒဏ်ရာဗရပွနဲ့။ ဆေးရုံကမေတ္တာရပ်ခံတယ်။
သူ ဒီနေရာကိုလာရင် စိုးရိမ်နေမိတယ်။ လမ်ခရီးက မအေးချမ်းဘူး။ လမ်းမှာ
အထပ်ထပ်စစ်ဆေးမှုတွေအပြင် အခန့်မသင့်ရင် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပေါက်ကွဲ
မှုတွေပါ ကြုံတွေနိုင်တယ်။ သူတို့ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံဟာ စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး
ရဘို့အတွက် ဘယ်လောက်ကြာညောင်းနေဦးမှာလဲ။ ဒါပေမယ့် Yesmin ယက်စ်မင်
ဆိုတဲ့အသက် ၇နှစ်လောက်အရွယ် သူ့ရဲ့သမီးငယ်လေးရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်
သူတို့မိသားစု ကြမ်းတမ်းတဲ့အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။
ဂါဇာစည်းရိုးကိုကျော်ဖြတ်ပြီး အစ္စရေးနိုင်ငံကို အကြိမ်အတော်များများ ယက်စ်မင်
ဆေးကုသခံဘို့လာရောက်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်တစ်ချိန်ရောက်လို့မှ
ရှုံးရလိမ့်မယ်ဆိုတာလဲကြိုသိနေခဲ့တယ်။ ယက်စ်မင့်မိခင်အပါအဝင် သူတို့တစ်မိသားစုလုံး
နေ့စဉ်နှင့်အမျှစိတ်ကြေကွဲနေကြရတယ်။ အခုတော့ ယက်စ်မင်လေးအတွက်ကြီးမား
မြေစိုင်မြေခဲဝါဝါတွေနဲ့ ပါလက်စတိုင်းတွေနေရာကိုသူမရောက်လာခဲ့ပြီ။ ယ္ခုဆိုရင်
သူငယ်မလေး ဘယ်အရွယ်ရောက်နေပြီလဲ။ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ကြိုတင်
ဂျူးဘာသာဝင် အစ္စရေးနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အခုလိုမျိုး ဂါဇာကိုဖြတ်ကျော်
ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ပါလက်စတိုင်းမိသားစုထံလာလည်မိတာကသူမအတွက်
စကားစမြည်စပြောကြတယ်။ သူမရဲ့မျက်ဝန်းက တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေနေတယ်
ဒီကိုလာပါဦးကွယ်”။ အခန်းတံခါးလိုက်ကာခန်းစည်းကို ဖယ်ပြီး ယက်စ်မင်ထွက်လာ
တယ်။ သူမမျက်ရည်တွေ တစ်ပေါက်ပေါက်ကြလာခဲ့တယ်။ ယက်စ်မင်ကိုပွေ့ဖက်နမ်းရှုံ့
လိုက်မိတယ်။ ယက်စ်မင်ဟာ အခုဆိုရင် ၁၃-၁၄နှစ်လောက်ရှိနေပြီ။ ယက်စ်မင်ရဲ့
ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှာ သူမရဲ့သား ယူနီရဲ့ ခန္ဓာတစ်စိတ်တစ်ဒေသရှိနေတယ်ဆိုတာ
“ကျွန်တော် သမီးလေးကို သူမရဲ့ဘဝအကြောင်း၊ ယူနီရဲ့ကျောက်ကပ်ဟာ
သမီးဘဝ ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း အမြဲပြောပြဖြစ်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်
နောက်တော့ ယူနီ နဲ့ ယက်စ်မင် တို့ပါတဲ့ ဘောင်သွင်းထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို
ယက်စ်မင့်ဖခင်က လက်ဆောင်ပေးရင်း သူမကိုစကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်တယ်။
”ခင်ဗျားတို့ကို ထာဝရသတိရနေမှပါ။ တကယ်တော့ ဂျူးတွေအစ္စရေးတွေဆိုတာ
စာကြွင်း။ ။ တိုက်ခိုက်နေကြဆဲဖြစ်တဲ့ အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းဒေသက
လွန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပါတ်သုံးပါတ်လောက်တုံးက အားလပ်ချိန် တီဗွီမှာ
ကြည့်မိတဲ့ Documentary တစ်ခုရဲ့ မူရင်းပြကွက်တွေကို ကိုပြန်လည်ခံစားပြီး
ရေးထားတာပါ။ အနည်းငယ်ကြာသွားတော့ အချို့အသေးစိတ်အချက်လေးတွေ
Posted by ဒီးဒုတ် at 1/29/2007 04:02:00 PM4comments
တစ်ခါတစ်ရံ အခြေအနေတစ်ခုဟာ အကျဉ်းအကြပ်ထဲရောက်နေရင်..
သို့မဟုတ်...အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကို ဖြေရှင်းနိုင်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို
ထင်မိရင် ရူးချင်တယ်လို့ ငြီးမိတတ်ကြတယ်...ခင်ဗျားတို့လည်းကြုံဘူးကြမယ်လို့
ထင်တယ်။ လူတိုင်း ယေဘူယျအားဖြင့် နားလည်လက်ခံထားတာက အရူးဆိုတာက
ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်တောင် အော်...သူက အရူးဘဲဆိုပြီး လျှစ်လျှူရှုလိုက်ကြ
မသိကျိုးကျွံပြုပြီး ခွင့်လွှတ်လိုက် တတ်ကြတယ်မှုတ်လား။ ဒါတင်မက ရူးသူပြုခဲ့တဲ့
အမှုကိစ္စတွေကိုတောင်မှ လိုက်ဖြေရှင်းပေးရတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့...
သူများက ကိုယ့်ကိုရူးတယ်လို့လက်ခံထားရင် ပြဿနာတစ်ရပ်ကိုမရှင်းနိုင်ရင်တောင်
ကိုယ့်ကို ရူးနေတယ်ဆိုပြီး ခွင့်လွတ်စေချင်လို့ ဒီလို ရူးချင်မိတာလို့အလွယ်ပြောရမလား..
သို့မဟုတ်...ရူးသွားရင် ဘာကိုမှ မသိတော့ဘူးထင်လို့၊ ပြဿနာနဲ့ ဝေးသွားမယ်ထင်လို့
ပြောချင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းက ဒီလို...
မောင်ဒီး ငယ်စဉ် တစ်ရံရောအခါက မောင်ဒီးနေတဲ့ရပ်ကွက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။
အဲဒီရပ်ကွက်မှာ လူတွေ နေ့စဉ် ဥဒဟိုသွားကြတဲ့ လမ်းမကျယ်တစ်ခုရှိတယ်...
ဈေးသွား၊ ကျောင်းသွား၊ အလုပ်သွား၊ ဘယ်သွားသွား ဒီလမ်းကသွားကြရတော့
အမြဲတမ်း စည်ကားနေတဲ့လမ်းပေါ့။ လမ်းဘေးဝဲယာမှာလဲ လူသွားလမ်းနဲ့ကပ်လျက်
အိမ်ခြံစည်းမှာစိုက်ထားကြတဲ့ သစ်ပင်ပန်းပင်တွေနဲ့လှပနေတတ်တယ်။ အဲဒီအချိန်
ကာလက တရုတ်နယ်စပ်ကဝင်လာတဲ့စက်ဘီးတွေဈေးတော်လွန်းလို့ အိမ်တိုင်းလိုလို
တရုတ်စက်ဘီးလေးတွေနဲ့ပေါ့။ ညနေခင်းဆိုရင် လူငယ်တွေ စက်ဘီးကိုယ်စီနဲ့
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သွားကြ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လမ်းသလားကြနဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ
တစ်ညနေပေါ့...အဲဒီလိုလှပနေတဲ့အချိန် မောင်ဒီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လက်ဘက်ရည်
ဆိုင်မှာ ကိုထီး သီချင်းနဲ့ငြိမ့်နေတုံး လမ်းမပေါ်မှာလူတွေရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ကုန်တာ
တွေ့လိုက်ရတယ်။ သွားလာနေတဲ့ လူတွေ၊ စက်ဘီးတွေ၊ ဆိုက်ကားတွေ အကုန်ရပ်
သွားတယ်။ အရူးတစ်ယောက်၊ ဗလက အလွန်ကောင်း မုတ်ဆိတ်ကျင်စွယ်ခပ်ရေးရေး၊
အင်္ကျီမပါ ဆံပင်ဖွာလံကျဲပြီး ဆဲဆိုအော်ဟစ်နေတယ်။ လမ်းမပေါ်ရှေ့နောက် ခေါက်တုံ့
ခေါက်ပြန် ပြေးနေတော့ သူရောက်သွားတဲ့နေရာတိုင်း လူတွေက သူနားက
ခပ်ရှဲရှဲနေပေးရတယ်။ ခဏနေတော့ တိုလီမုတ်စ ရောင်းတဲ့ကုလားဆိုင်ထဲလှမ်းကြည့်
နေပြီး ရုတ်တရက်အဲဒီဆိုင်ထဲဝင်ပြေးသွားတယ်။ ပြန်ထွက်လာတော့ လက်ထဲမှာ
(ငါးပေါင်လား ဆယ်ပေါင်လားမသိဘူး...ဆိုကြပါစို့) အရိုးရှည်တပ်ထားတဲ့
ဆယ်ပေါင်တူကြီးကိုင်ပြီးထွက်လာတယ်။ လမ်းပေါ်က စောစောကရပ်ကြည့်နေတဲ့
လူတွေ ပြေးလိုက်ကြတာ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ အရူးကတော့ ခေါင်းပေါ်မှာ တူကြီး
ဝေ့ပြီး ဆဲဆိုနေတယ်။ ဘယ်သူမှ အနားမသီရဲဘူး။ အရူးက တကယ်ကိုထုမယ့်ပုံဘဲ။
အောင်မလေးခဏအတွင်း ခါးဝတ်တောင်မပါတော့ဘူး၊ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းဘဲ။
ပါတ်ဝန်းကျင် အခင်းအကျင်းနဲ့ လားလားမျှ မသင့်တော်မအပ်စပ်တဲ့ပုံရောက်သွားတယ်။
(အမျိုးသမီး ကြီးကြီးငယ်ငယ် အိုအိုပျိုပျို တွေလည်းအနီးမှာရှိနေကြတယ်မှုတ်လား။)
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ မောင်ဒီးတို့ထိုင်နေတဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထဲ ဝင်လာပါကရောလား။
မောင်ဒီးတို့သူငယ်ချင်တစ်သိုက်လည်း ဘာပြောကောင်းမလဲ ဗန္ဓုလအမျိုးတွေပီသစွာနဲ့
အရူးနဲ့လွတ်တဲ့ ဆိုင်ထောင့်တစ်နေရာကို ထပြေးလိုက်ကြတာ...အခြားဝိုင်းမှာထိုင်နေ
သူတွေလည်း ထိုနည်း၎င်းပေါ့။ အရူးက စတင်ကြမ်းတော့မဲ့ အရိပ်ယောင်ဘဲ။
တူကိုယမ်းနေတာ ဆိုင်က စားပွဲအချို့ဖယိုဖယဲဖြစ်သွားတယ်။ အပြင်မှာလည်း လူတွေ
ဝိုင်းအုံကြည့်နေတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ရဲတို့ အရံမီးသတ်တို့ ဘယ်ရောက်နေလည်းမသိဘူး။
အခုမှ ဖုန်းဆက်ခေါ် လူလွှတ်ခေါ်ရင်တောင် အရူးတစ်ခုခုလုပ်တော့မှာဆိုတော့
အချိန်မီရောက်လာဘို့ဆိုတာက မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ မောင်ဒီးတို့ တစ်ယောက်နဲ့
တစ်ယောက်မသိမသာကြည့်မိကြတယ်။ ဒီအရူးကိုသွားဖမ်းဘို့ သတ်ပုတ်လုံးထွေးဘို့
ထိအောင် ရဲဝံ့စွာစွန့်စားဘို့ကော ခွန်အားဗလအရကော တို့မှာမရှိကြပါလို့ ပြိုင်တူ
အကြည့်တွေနဲ့ သဘောတူချက်ရယူပြီး လူစွမ်းကောင်းတစ်ယောက်များ ပေါ်လာ
လေမလား (ခုခေတ် Batman တို့ Supermanတို့လို) ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့
အဲဒီအချိန်မှာဘဲ အရူးရဲ့နောက်ဘက် မလှမ်းမကမ်းနေရာက လူတစ်ယောက်က
လှစ်ကနဲ တူကိုင်ထားတဲ့လက်ကို ဝင်ချုပ်ကိုင်လိုက်တယ် နောက်တစ်ယောက်က
လူတွေဝင်ရောက်ချုပ်လိုက်တာ ချုပ်တဲ့သူတွေများလွန်းလို့အရူးတောင် မမြင်ရတော့ဘူး။
(မောင်ဒီးတောင် ချုပ်မလို့သွားတာ လူပြည့်သွားလို့.....အဟီး...)
စတင် အရူးကို ဝင်ချုပ်တဲ့သူဟာ ပါးနပ်ပြီး သတ္တိရှိတယ်လို့ပြောရမယ့်အပြင်
သေချာတာကတော့ တက်ညီလက်ညီ မိမိရရချုပ်ကိုင်မိဘို့လဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာ
နောက်တော့အရူးကိုအဝတ်အစားတွေ ပြန်ဝတ်ပေးပြီး တော့ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်
တွေရောက်လာတာနဲ့ သူတို့လက်ထဲအပ်လိုက်တယ်။ မောင်ဒီးတို့သူငယ်ချင်းတစ်စု
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ပါတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားမှာ အရူးတွေတွေ့နေကြရတယ် မှုတ်လား။
ငါသာလျှင်အားလုံးထက်တော်တတ်သူလို့ “ငါ”ဆိုတဲ့အတ္တရူးတွေ၊ ဘယ်သူမှ
အနားကပ်ခွင့်မရလောက်အောင် (အထက်က မောင်ဒီးပြောခဲ့သလို တူကြီး
ကိုင်ထားတဲ့ ဝစ်လစ်စလစ်နဲ့) ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ အရူးတွေ အပြင် အခြားသော
ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ အရူးတွေပြည့်နေတယ်။ အရေးကြီးတာက ဒီအရူးတွေကို
ဘယ်လို အသိတရားပုံမှန် ပြန်လည်ရရှိလာအောင် ဘယ်လိုကုသပေးကြမယ်
ဆိုတာကတော့ မောင်ဒီးရဲ့ဦးနှောက်သေးသေးလေးနဲ့ အဖြေရှာဘို့ခက်နေပါတယ်။
ကဲ “အရူးတွေလွတ်နေတယ်” ဘယ်သူတွေစဖမ်းကြမလဲ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ....
Posted by ဒီးဒုတ် at 1/26/2007 01:49:00 PM 11 comments
အခွန်? တာဝန်? အကြပ်ကိုင်ခြင်း?
နေနေနိုင်ရဲ့ဒီပို့စ်ကိုဖတ်မိတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်လုပ်
နေကြတဲ့ ရွှေနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတိုင်းရင်းသားတွေဟာ အခက်အခဲတွေ
မျိုးစုံကြုံတွေ့နေကြရတယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိဖြစ်တယ်။ အခွန်ဆိုလို့
မောင်ဒီးအရင်ရေးဘူးတဲ့ ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီးမှာ ချောစာထုပ်သွားထုတ်တုံးက
ပေးခဲ့ရတယ် အခွန်ဆိုတာကိုလည်းပြန်သတိရနေမိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ
ကပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအတော်များများဟာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
ဝင်ရောက်ကတည်းက “လုပ်ပိုင်ခွင့်” ဆိုတာကိုစွဲကိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ကျိုး
ကိုသာအဓိကထားနေကြတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ လာဒ်ငွေ၊အခြားရစရာများများရနိုင်တဲ့
နေရာလုပ်ငန်းဌာနကိုခေတ်စကားနဲ့ “ခွင်” (ဂွင်လို့အသံထွက်တယ်)လို့ခေါ်ကြတယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာ အရွယ်ရောက်လာလို့ အစိုးရဝန်ထမ်း(သို့)ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအလုပ်
ကိုလုပ်ဘို့ရွေးချယ်ရတော့မယ်ဆိုရင် ခွင် ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာကိုအရင်
ကြည့်ကြတော့တယ်။ ပြီးရင်တော့ “အာဏာ” ဆိုတာကြီးပါလာရင် ပိုပြီးတော့တောင်ဆိုး
သပေါ့ဗျာ။ မောင်ဒီး ဘွဲ့လွန်သင်တန်းလေးဘာလေးတက်ခဲ့တုံးကသင်တန်းဖော်တွေနဲ့
လို့တိုင်ပင်ကြတယ်။ သတင်းအချက် အလက်ရှာကြမယ်ဆိုတော့ တိကျတဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်း
ထုံးစံတွေမရှာနိုင်ခဲ့ဘူး။ ယုတ်စွအဆုံး နိုင်ငံသားတွေသိထားသင့်တဲ့ အခွန်ဆိုတာနဲ့
ပါတ်သတ်တဲ့လက်စွဲ စာအုပ်တို့ စာစောင်တို့ဆိုတာတောင် မေးမြန်းရှာဖွေဘို့ အတော့ကို
မမှီခဲ့ပါဘူး)။ အဲဒါနဲ့ အတိုပြောရရင် အခွန်အကြောင်းမလုပ်တော့ဘူးဆိုပါတော့ဗျာ။
မသိတဲ့အခါကျတော့ ဘာကြောင့် ဘယ်လိုဘဲတောင်းတောင်း ပေးနေကြရတော့ပေါ့။
ပြကြရမယ်ဆိုလာရင်တော့ ပေးကိုပေးကြရတော့မှာပေါ့။ အဲဒါတစ်နည်းအားဖြင့်
အကြပ်ကိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ အင်း ကိုယ်ဘာလုပ်ရမယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသား
တစ်ယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေး၊ တာဝန်ဝတ္တရား စတာတွေ တိတိကျကျ
မရှိသေးသ၍ မသိသေး၊မဖော်ထုတ်နိုင်သေးသ၍ ကျွန်တော်တို့ အကြပ်ကိုင်တဲ့
Posted by ဒီးဒုတ် at 1/23/2007 09:49:00 AM3comments
လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းပါတ်က ကိုရွှေပေါက်ဖော်ကြီး (တရုတ်နိုင်ငံ)က မြေပြင်အထက်
တာလတ်ပစ်ဒုံးကျည် နဲ့စမ်းသပ်ပစ်ခွဲခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေး
ကောင်စီက နယူးရော့ခ်မှာရှိနေတဲ့ လက်ရှိ တရုတ်ကုလသံတမန်ကို တယ်လီဖုန်းကမေးမြန်း
ကြည့်တော့ “ဟင်...ဟုတ်လား ..သေချာလို့လား...မသိလိုက်ရပါလား”..ဘူးခံသွားသတဲ့။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကို ဖက်စ်ထိုး ဖုန်းဆက်နဲ့လှမ်းမေးတော့ ဘာအကြောင်း
ပြန်ချက်မှမရခဲ့ဘူး။ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သွားကြသူတွေထဲမှာ နိဟွန်ကြီး(ဂျပန်)နဲ့
(ဂျပန်ခမျာမှာတော့ မြောက်ကိုရီးယားက စမ်းရင်ကြောက်ရ တရုတ်ကဆော့ရင်ကြောက်ရနဲ့
မသာကာ ဂျပန်ဂြိုလ်တုတစ်လုံးကို ပစ်ပြီးမှ ဆောရီး မှားသွားလို့ပါ ပြောရင်
ဘယ်လိုလုပ်မလဲ...)။ အန်ကယ်ဆမ်ကတော့ ဒါဟာနိုင်ငံတကာက
မောင်းသူမဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် လူပါတဲ့အာကာသယာဉ်တွေအတွက်ဖြစ်ဖြစ် အန္တရယ်ရှိတယ်တဲ့။
ပြီးတော့ US ကာကွယ်ရေးသုံး (ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ထောက်လှမ်းစောင့်ကြပ်တဲ့)
တယ်လို့ ဆိုလိုတာထင်ပါတယ်။) သတင်း တစ်စကိုမျှဝေရင်းနဲ့မောင်ဒီးဆန္ဒပြောရရင်
နိုင်ငံအချင်းချင်း စစ်မက်ဆိုင်ရာအင်အားပြသမှုတွေကိုရှေ့တမ်းမတင်ဘဲ ကမ္ဘာကြီး
သာယာလှပဘို့ အငတ်ဘေးကလွတ်ဘို့ မတရားမှုတွေက ကင်းဝေးဘို့ ဝိုင်းဝန်းကူညီ
Posted by ဒီးဒုတ် at 1/19/2007 03:15:00 PM 1 comments